अपाङ्गताको सवालमा छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नु माग
काठमाडौं, २४ मंसिर । अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न ४० सङ्घसंस्थाले अपाङ्गताको सवालमा छुट्टै बजेट छुट्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सवालमा सरकारको बजेट नीति तथा कार्यक्रम र भावी योजनाका बारेमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा...
गुप्तांग काटिएको अवस्थामा शव फेला
दाङ, २४ मंसिर । दाङको तुलसीपुर नगरपालिका–८ को महालक्ष्मी सामुदायिक वन समूहमा एक पुरुष मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले दिएको जानकारीअनुसार घाँस काट्न गएका स्थानीयवासीले मङ्गलबार दिउँसो सामुदायिक वनभित्र...
व्यवस्थित आर्यघाट निर्माणसँगै दाहसंस्कारमा सहज
दमक, २४ मंसिर । झापाको धार्मिक तथा कनकाई नदीको पूर्वी तटमा व्यवस्थित आर्यघाट निर्माणसँगै शव अन्त्येष्टि गर्न सहज बन्दै गएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएर रहेको मध्य झापाको कनकाई आर्यघाट सञ्चालनमा आउन थालेपछि यहाँको...
सेन्ट जोसेफ बोर्डिङ स्कुलका कारण विद्यार्थीको मृत्यु
नवलपरासी, २४ मंसिर । शिक्षकले मानसिक तनाव दिएका कारण सहपाठीले आत्महत्या गरेको भन्दै कावासोती नगरपालिका २ स्थित सेन्ट जोसेफ बोर्डिङ स्कुलका विद्यार्थीले मंगलबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। कक्षा ९ मा अध्ययनरत १५ वर्षीय आरएन...
आफन्तबाट नै हत्या र बलात्कारका घटना बढ्न थाले
काठमाडौं, २४ मंसिर । पछिल्लो समय बढेका अपराधले नेपाली समाज क्रूर र निर्दयी हुँदै गएको देखाएको छ । नजिकका आफन्तबाट नै हत्या र बलात्कारका घटना बढ्न थालेका छन् । काठमाडौंको डल्लुमा सोमबार दिउँसो अत्यन्तै...
काठमाडौं, २४ मंसिर । काठमाडौं मंसिर २४ बबरमहलमा आइतबार साँझ बसको ठक्करबाट स्कुटर चालक म्याग्दीकी शान्ता हमालको मृत्यु भएको २४ घन्टा नबित्दै सोमबार साँझ तीनकुनेमा ट्रकको ठक्करबाट अर्की स्कुटर चालक उदयपुरकी निशा बस्नेतको मृत्यु...
परराष्ट्र मन्त्रालयमा बबण्डर
काठमाडौ, २४ मंसिर । सार्क शिखर सम्मेलन सकिए लगत्तै राजदुतहरु नियुक्ती भएको छ । राजदूत नियुक्ति सँगै परराष्ट्र मन्त्रालयको महाशाखा सहसचिवको नेतृत्वमा नहुने अवस्था आएको छ । एक महिनामा महाशाखा परिवर्तन गर्न पर्ने भएको...
कुरा मिलेकै हो त ?
काठमाडौ, २४ मंसिर । प्रमुख चार राजनीतिक पक्षबीच प्रदेश सभाको नाम र निर्वाचन प्रणालीका बिषयमा सैैद्धान्तिक समझदारी जुटेको छ । प्रदेशको संख्या र त्यसको भगौलिक विभाजनका बारे भने सहमति हुन बाँकी छ । प्रधानमन्त्री...
घुस्याहा कर्मचारी समात्न बुटवलदेखि नवलपरासीसम्म
तिर्थराज डुम्रे कावासोती, २३ मंसिर । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाइरहेका बेला नेपाल बिद्युत प्राधिकरण कावासोती बितरण केन्द्र नवलपरासीका सुपरभाइजर दिनेश श्रेष्ठ घुस रकम लिँदै गर्दा रङ्गेहात पक्राउ परेका छन् । फर्निचर उद्योग सञ्चालनका लागी...
मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ, २३ मंसिर । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विभेदको अन्त्य, आत्मसम्मानको प्रत्याभूति र समावेशी विकासद्वारा मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने तर्फ सरकार क्रियाशील रहँदै आएको बताउनु भएको छ । विश्व मानव अधिकार दिवस २०१४ का अवसरमा...
काभ्रेमा मात्रै तीन वर्षमा गरे २ सय ४९ ले आत्महत्या
रामसुन्दर आचार्य काभ्रे, २३ मंसिर । मानवअधिकारको दृष्टिकोणले पनि आत्महत्या आफैँमा महापाप हो । आफ्नो हत्या आफैँले गर्न सक्ने आँट किन गर्छन् मान्छेहरुले ? समस्या समधानको अन्तिम विकल्प आत्महत्या नै हो त ? जिल्ला...
प्रक्रियाबाटै भए पनि माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने काँग्रेस र एमालेको अडान
काठमाडौँ, २३ मंसिर । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले सकेसम्म सहमति नभए प्रक्रियाबाट भए पनि निर्धारित समय आगामी माघ ८ मा संविधान जारी गर्नुपर्ने दोहोर्‍याउनुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेपाली काँग्रेसका...
« 1 … 6,181 6,182 6,183 6,184 6,185 … 6,656 »